I-DNA (deoxyribonucleic acid) uhlobo lwe-macromolecule eyaziwa njenge- nucleic acid . Yinto efana ne- helix kabini ephihliweyo kwaye iqulethwe ngamacu omde okutshukela okunye kunye namaqela e-phosphate, kunye neziseko ze-nitrogen (adenine, thymine, guanine kunye ne-cytosine). I-DNA iququzelelwe kwizinto ezibizwa ngokuba ngama-chromosomes kwaye zihlala ngaphakathi kwiseli yeeseli zethu. I-DNA ifumaneka kwi-cell mitochondria .
I-DNA iqulethe ulwazi lwezofuzo oluyimfuneko ekuveliseni izakhi zeeseli, i- organelles , kunye nokuveliswa kobomi. Ukuveliswa kweprotheni yinkqubo ebalulekileyo yeeseli exhomekeke kwiDNA. Iinkcukacha eziqulethwe kwi- code ye-genetic zidluliselwa ukusuka kwi-DNA ukuya kwi- RNA kwiiprotheyini eziphumo ngexesha leprotheni synthesis.
I-DNA iqulethwe ngumqolo we-sugar-phosphate ne-basrogenous bases. Kwi-DNA ephindwe kabini, iziseko ze-nitrogen zihamba. Iimbini ze-Adenine kunye ne-thymine (AT) kunye neendibano ze-guanine kunye ne-cytosine ( GC) . Ubume be-DNA bufana ne-staircase. Kwimilo emibini ye-helical, amahlangothi omgangatho weziteyithi akhiwa ngamacandelo e-deoxyribose ishukela kunye ne-molecules yamaphosphate. Amanyathelo amanyathelo akhiwa ngamaseko azitrogenous.
Ubume obuninzi be-helix obuyi-DNA obunobuncedo bunceda ukwenza le molekyuli ye-biological ihambelane. I-DNA iqhutywe ngakumbi kwizakhiwo ezibizwa ngokuthi i- chromatin ukuze ikwazi ukungena ngaphakathi kwisucleus.
I-Chromatin yenziwe nge-DNA ehlanganiswe ngeeprotheni ezincinci ezibizwa ngokuba yi- histones . I-Histones inceda ukuhlela iDNA kwizakhiwo ezibizwa ngokuthi i- nucleosomes, ezenza i-chromatin fibers. I-Chromatin fibers iqhutywe kwaye ixutywe kuma- kromosomes .
Uhlobo lwe-DNA oluphindwe kabini lwe-DNA lubangela ukuphindaphinda kwe-DNA .
Ngokuphindaphinda, i-DNA yenza ikopi yayo ngokwayo ukuze idlulise ulwazi lwezofuzo kwiiseli zentombi ezintsha. Ukuze kwenziwe ukuphindaphinda, i-DNA kufuneka iguqulwe ukuvumela ukuba i-cell replication machine ikopishe i-strand nganye. I-molecule ngayinye ephindaphindiweyo yenziwa yinqumle kwi-molecule ye-DNA yokuqala kunye ne-strand entsha. Ukuziphendulela kuvelisa ama-molecule e-DNA efana nemfuyo. Ukuphindaphinda kwe-DNA kwenzeka kwi- interphase , isigaba ngaphambi kokuqala kweenkqubo zecandelo le-mitosis kunye ne-meiosis.
Ukuguqulelwa kweDNA yinkqubo yokwenziwa kweproteins. Amacandelo e-DNA abizwa ngokuthi i- genes iqulethe ukulandelana kwemfuza okanye iikhowudi zokuvelisa iiprotheni ezithile. Ukuze uguqulelo lwenzeke, i-DNA kufuneka iqale ingabonakali kwaye ivumele iDNA ukuba ibhalwe phantsi . Ukubhalisa, i-DNA ikopiwe kwaye i-RNA inguqu ye-DNA code (i-RNA transcript) iveliswa. Ngokuncediswa kweeselbosomes zeseli kunye nokudlulisa i-RNA, umbhalo we-RNA uguqulela iinguqulelo kunye neeprotheni.
Naluphi na utshintsho ekulandelelaneni kwama-nucleotide kwi-DNA eyaziwa ngokuba yi- gene genetic mutation . Ezi zinguqu zinokuchaphazela idijithi enye ye-nucleotide okanye iinqununu zegenesti ezinkulu ze-chromosome. Ukuguquka kweGenes kubangelwa yimitagen efana neekhemikhali okanye i-radiation, kwaye ingakhokelela kwiziphoso ezenziwa ngexesha lokuhlukana kweseli.
Ukwakha imodeli ye-DNA yindlela enhle yokufunda malunga nesakhiwo seDNA, umsebenzi kunye nokuphindaphinda. Unokufunda indlela yokwenza i-DNA imodeli ngaphandle kwekhadibhodi, ubucwebe kunye nokufunda indlela yokwenza i-DNA model usebenzisa i-candy .
Isingeniso kwiProjekthi ye-Human Genome
Umthetho kaMendel woNcedo oluzimeleyo
4 Iintlobo zeRNA
Isixeko sase-Olmec saseLaventa
I-Pullman Strike ka-1894
Yintoni iBattery Acid?
Iimpawu zeMandulo zaseRoma
Yayiyiphi Inqaku elide kunayo yonke ilizwe elizweni lihamba ngee-80s?
Funda indlela yokudibanisa "I-Saisir" (ukukhupha) ngesiFrentshi